> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo Flash Banner aan Flash Adobe
Waxaa inta badan laygu yaabeen Flash banner qabow on Web, waxaana doonayaa inaan sameeyo banner ah kartoon ah ee aan Website. Laakiin sida ay u abuuraan banner la yaab leh?
Fikradda ugu horeysay ee maskaxdayda waa waxaan abuuri doonaa mid la Adobe Flash saarka karo. Waxaan diidi fikraddan si deg deg ah sababahan soo socda. Sida aan ogahay, Adobe Flash waa qalab loogu talogalay xirfadlayaasha si ay u abuuraan animations Flash iyo filimada. Ma aha qalab fiican ii. Haddii aan isticmaalo software this, waxaan qabaa inaan u leeyihiin in ay ku qaataan waqti badan barashada sida loo isticmaalo. Ka sokow, Adobe Flash buu qaali u yahay in aanan rabin in ay ku iibsadaan.
Ma jiraa wax fudud in la sameeyo Flash banner aan Adobe Flash? Fikrad An booda ee maskaxdayda. Oo dhan newbies Flash aan u wadaagi doonaa.
Sida aan ognahay in ay jiraan animations hodan ku MS PowerPoint, waxaan noqon kartaa dhaqdhaqaaq ka si ay u movie Flash ah? Jawaabtu waa "Haa".
Haddii aad qabto MS PowerPoint in your computer, waxaad samayn kartaa banner PowerPoint ah oo loogu badalo in ay Flash banner qabow la PowerPoint in Video .
Oo waxaan soo ogaaday waxaa jira qaar ka mid ah faa'iidooyinka la PowerPoint si ay u abuuraan kartoon movie .
PowerPoint waa mid aad loo jecel yahay oo si sahlan loo isticmaali. PowerPoint waa arrin user-friendly. Kaliya qasabno qaar ka mid ah ka dib, slideshow u cajiib ah ka soo bixi doonaan. Inkastoo aad tahay oo kaliya bilaabayso, Casharrada badan oo on line ayaa kaa caawin doona.
Waa wax ku ool ah. Noocyada animation ayaa xaqiiqo ah raali galin lahayd baahidaada filim Flash ah. Waxa kale oo aan ku dari kartaa music, sawiro, iwm inay faylasha.
Waxaan u isticmaali PowerPoint ee 2007. Haddaba aan idin ​​tusin tallaabooyinka .
1. In la abuuro slide cusub. In aan computer, size default ee slide ah waa On-screen shot ( 4: 3) . Sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay inaad ka taagay page size sida calan ee Design .
In ka Slide xajmi u , waxaad dooran kartaa Banner doorasho. Ama waxaad sameysan kartaan baaxadda sida aad ugu jeceshahay.
Click OK , waxaad ka arki kartaa banner waa qaab ka hor.
Markaasay aad ku qorshayso karaa calan sida aad jeceshahay. Waxa kale oo aad ku dari kartaa animations, dhawaaqa, sawirada iyo walxaha more galay aad design.
1) Waxaan qotomiyey ah theme in banner this. Sida aad ogtahay, MS PowerPoint taageertaa mawduucyada badan. Waxaan dooranaya mid ka mid ah. Waxa ay u muuqataa mid aad u cusub oo qabow.
2) Geli nalka Laydhka: Insert Picture ka dibna dooro sawir aad rabto in aad is geliso ka your computer. Iyo buro Tani waa image GIF ah, sidaas darteed waxaan ha isku darin animations wax u galay.
3) Geli sanduuqa qoraal ah iyo talooyin ku xukunaatay "Sida loo sameeyo Flash banner la PowerPoint ". Ka dibna ku dar saamaynta sanduuqa qoraalka. Waxaa jira afar animations: galo, xooga iyo ka bixitaanka. Kaliya waxaan ku dari saamayn galo ee.
Waxaa jira saamaynta badan oo aanu ka dooro kartaa animations kasta. Waxaad ka heli kartaa saameyn dheeraad ah oo ka soo Raadka More doorasho.
Waxaad qabsato kartaa xawaaraha saamaynta. Waxaan ku dhejiyeen (qotomiyey) si dhexdhexaad ah .
Ka dibna riix OK . Interface kama dambeystu waxay tahay sidii dabagal (fadlan hubi file PowerPoint aad): Waxaad riixi kartaa F5 in ay ku eegaan Flash banner aad.